Dr Koongoo keessatti talaalliin Iboolaa marsaa lammaffaan kennamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Talaalliin Iboolaa lammaffaa, milkaa'ina isaa yaaluuf, Rippaablika Dimokraatawaa Koongoo (DR Koongoo) keessaatti namoota 50,000f kennamuuf jira.
Talaalliin dhaabbata 'Johnson & Johnson' (J&J) jedhamuu kun talaalli dhaabbata 'Merck' kan kanaan dura namoota 250,000 kennamee waliin kan amma faayidaarra kan oolu ta'a.
Yaaliin talaallii iboolaa Merck'n gaggeefamee amma Dhaabbata Fayyaa Addunyaan (WHO)mirkaneeffameera.
Tatamsa'ina Iboolaa guddaa isa lammaffaan, DR Koongoo keessaatti namooti 2,100 ol du'aniiru.
Yeroo tokko qofaa kan kennamu talaalliin Merck kana Koomishiniin Awurooppaas mirkaneesseera.
Talaalliin J&J, garaa garummaa guyyaa 56'n si'a lama kan keennamu yeroo ta'u, ga'eessootaafi da'imman ganna tokko olii kan DR Koongoo magaalaa Goma lafa tatamsa'inni hamaa dhibee kanaa hin jirree jiraniif kan kennamu ta'a.
Gomaan magaalaa daangaa Ruwaandarra jirtuufi jiraattoota miiliyoona tokko kan qabdudha.
Sodaa Eboolaaf daangaan DR Kongoofi Riwaandaa cufame
Daarektarri dhaaba 'UK Public Health Rapid Support Team' jedhamuu Prof Daani'eel Bawuschi saayintiistii yaalii talaallii kana kan dursudha.
Talaalliwwan lamaan gidduu waanti 'wal morkatu' akka hin jirreefi lamaanuuf bu'aa fi miidhaa ofii isaani akka qabani dubbateera.
Tallaalliin Merck yeroo tatamsa'inni dhibee kanaatti, namoota dhukkubsataa Iboolaaa waliin kallattiinis ta'ee karaa biraan wal qunnamaaniif kan kennamuu yeroo ta'u talaallin J&J ammoo nama Iboolaaatti hin saaxilamne tokkoo dhibee kana of irraa akka ittisuuf kan gargaaru danda'udha.
"Talaalliin J&J yeroo tatamsa'inni jirutti kan fayyadu hin ta'u, sababiin inni guddaa talaalliin kun milkaa'inaan hojjachuuf dabaree lamaan kennamuu waan qabuufi" jedha Prof Daani'eel Bawuschi
Talaalliin kun garuu " yeroo dheeraaf dhibee kana offiirraa ittisuu kan nama dandeessisuufi akka talaallii Merck miidhaa baayyee kan hin qabaannedha" jedha.
Ministeerri Fayyaa Hawaasaa DR Koongoo, Dr Eteni Longondo "Hojii keenyaa ciimsuun dirqamadha. Kanaaf waayiloota idil addunyaa waliin hojjachuun gartuu ogeessoota keenya dhibee kanarratti hojacha jiraniif meesha ittin lolan barbaachisu dhiyeessuun tatamsa'ina dhibee hamaa kana dhaabuuf kan hojjachaa jirra".
Tatamsa'inni dhibee kanaa odeeffannoo sirrii hin taanee fi hamii dabalatee rakkoo nageenyaa cimaa naannicha jiruu caalaatti saffisaa jira.
Tatamsa'a dhibee kanaa bara 2018 Hagayyaa eegalee booda dhaabbilen fayyaa 200 ta'an haleelamaniiru, kanaaf talaalli haaraa hawaasa kanumaan shakkii qabutti dhiyeessuun hojii cimaa ta'a.
Sodaa Eboolaaf daangaan DR Kongoofi Riwaandaa wal qunnamsiisu cufame